ट्वीट (Tweet) रिट्वीट (RT) र फेवरेट (Favorites) - MeroReport
Posted by Binaya Shekhar on February 13, 2017 at 12:30pm
मानौ तपाईका फलोअर धेरै छन् र तपाई कुनै एउटै बिषय, उही कुरा, लगातार ट्वीट गर्नुहुन्छ । आफ्नो ब्लग लिंङ्क अनावश्य रुपमा सेयरीङ गर्नुहुन्छ, अरुका ट्वीटलाई रिट्वीटमात्र गर्नुहुन्छ? यसोगर्दा तपाईका फलोअरले नयाँ सूचना पाउलान्? उनीहरुले के बुझ्लान् र तपाईलाई कस्तो प्रतिकृया देलान्? अरुले के सोच्छन् होलान्? पहिले @iPagalbasti हाल @MadsArea भन्छन्, “मलाई त त्यस्तो बेलामा इरिटेट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा म पहिले त्यसो गर्ने साथीहरुलाई तर्क सहित सुझाव दिन्छु, र पनि सुनेन भने ब्लक हान्दिन्छु ।”
@Pokharelketi ले हिन्दी सिनेमा Cock Tail हेरेपछि ट्वीट गरिन, “मलाई ककटेल रमाइलो लाग्यो ।” उनको ट्वीटलाई कसैले तुरुन्तै फेवरेट गर्यो । अनि उनले लेखिन्, “ट्वीटरमा फेवरेट गर्नु भनेको के हो, केलाई र किन गर्ने भन्ने बारेमा कसैले एउटा जानकारीमुलक लेख लेखिदिए पनि हुन्थ्यो ।”
भर्खर भर्खर ट्वीटर प्रयोग गर्न लाग्दा बिद्यार्थी नेता @t_urmila उनका फलोअर र उनले फलो गर्ने केही मान्छेले गरेका हरेक ट्वीटलाई RT अर्थात रिट्वीट र फेवरेट (favorites) दुवै गर्थिन् । उनको यस्तो व्यवहारलाई कसैले कमेन्ट गरेपछि एकदिन उनले सोधिन् “के लाई RT गर्ने र केलाई फेरवेट गर्ने जान्नु आवश्यक रहेछ ।”
प्रस्तुत केही उदाहरणहरुले स्पष्ट भन्छन् भर्खरै यो सञ्जालमा प्रबेशीहरुलाई मात्र हैन नियमित ट्वीट गर्नेहरुलाई पनि ट्वीट, रिट्वीट, फेरवेट किन गर्ने भन्ने जानकारीको अभाव छ । ट्वीटर सोसल मिडिया हो र यो सार्वजनिक माध्यम पनि हो, ट्वीटरमार्फत सूचना र बिचार आदानप्रदान हुने हुनाले पनि आफुले गरेका कुनै पनि ट्वीटर कृयाकलापले अरुले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने जानकारी हुने हो भने ट्वीटर हरेक दिन झन सुन्दर हुदै जानेछ । बिगत केही समयदेखिको आफ्नो ट्वीटर अनुभव, ट्वीटर प्रशिक्षक पाम मूरे (Social Media Today) र सामाजिक सञ्जालका केही नेपाली प्रबर्धकसँगको भलाकुसारी र उनीहरुका पनि बिचार सुनेपछि ट्वीट, रिट्वीट, र फेरवेट सम्बन्धि आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गरेको छु, फरक धारणालाई स्वागत छ
किन ट्वीट गर्ने?
सबैका फरक फरक धारणा हुनसक्लान् । तर ट्वीटरलाई मैले इन्टरनेटमा सार्वजनिक सूचना आदानप्रदानको शशक्त माध्यमको रुपमा मानेको कारणले गर्दा ट्वीट गर्दा निम्न कुराको उत्तर सोचेर मात्र ट्वीट गर्छुः
मैले ट्वीट गर्ने बिषय समय सान्दर्भिक छ, त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिग कुरा हो की अरु धेरैका लागि उपयोगी पनि छ?
मैले गरेको ट्वीटबाट कसैले कुनै नयाँ सूचना, बिचार वा जानकारी पाउन सक्छ?
मैले गरेको बिषय, सूचना, जानकारी नवीनतम छ की अरुले पटकपटक गरेका कुराहरुलाई नै म दोहोर्याइरहेको छु?
के ट्वीटमार्फत मैले कुनै नयाँ दृष्टिकोण दिन सकेको छु, जुन अरुका ट्वीटमा भन्दा भिन्न छ?
मैले गरेको ट्वीट सतप्रतिशत सही छ? या म अनुमानको भरमा बोल्दैछु?
मैले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्ने तथ्य, लिङ्क वा अरु कुनै स्रोत छ जसले मेरो भनाईलाई आधिकारिक बनाउँछ? म बिश्वस्त छैन भने कुनै स्रोतको हवाला दिएको छु?
मैले कुनै पनि अप्रीय वा अपाच्य शब्द बोल्दै छु की?
मैले दिएको सूचना, बिचार वा जानकारी असत्य, भ्रामक, शान्ति सद्भाव भडकाउने, उत्तेजीत बनाउने खालको ठहरीयो भने त्यसबाट पर्ने प्रभावको लेखाजोखा गरेको छ?
मलाई साइवर कानूनको बारेमा जानकारी छ?
किन ट्वीट गर्ने भनेर अरु पनि थुप्रै लिष्ट तयार हुनसक्ला, तर माथि उल्लिखित कुराहरुको उत्तर सोचेर जिम्मेवारीपुर्वक ट्वीट गर्नु नै सोसल मिडिया उपभोक्ताको लागि नैतिक संहिता हो । जिम्मेवारी र दायित्वबोध यसरी नै बढ्दै जान्छ जसले गर्दा सोसल मिडियामा हामी फरक परिचयका साथ चिनिन सक्छौ ।
केलाई र किन रिट्वीट (RT) गर्ने?
जब तपाई जतिबेला पनि जुनसुकै ट्वीट रिट्वीट गर्नुहुन्छ एकपटक सोच्नोस् त तपाईका फलोअर्स्ले त्यसलाई कसरी लिनेछन्? ट्वीटजस्तै रिट्वीट गर्दा मैले चाँही निम्न कुरामा निम्न प्रश्नहरुमा ध्यान दिने गरेको छुः
सबभन्दा पहिले ध्यान दिने कुरा हो अरुले गरेको ट्वीट बिश्वसनीय छ की छैन? त्यो ट्वीटमा माथि उल्लिखित बिशेषता छन् की छैनन्?
रिट्वीट गर्नुभन्दा पहिले म सोच्छु मैले तपाईलाई प्रत्यक्ष रुपमा चिन्छु वा हाम्रो भेट ट्वीटर मार्फत मात्र भएको छ? हामी एकअर्कालाई फलोमात्र गर्छौ की हाम्रो बीचमा ट्वीटरमा कुराकानी पनि भएको छ? एकअर्काले गर्ने काम र केही व्यक्तिगत जानकारी थाहा छ की छैन?
हामी ट्वीटरमा ब्लग पनि सेयर गर्छौ । सेयर गरेको ब्लगमा मलाई कामलाग्ने खुराक छ? ब्लग लिङ्क स्पष्ट पढ्न सकिन्छ? कुन भाषामा छ? के बिषयको ब्लग हो? आफैले लेखेको हो अरु कसैको कृतिलाई हुवहु सारेको हो? लिङ्कबाट भाइरस प्रवाह हुने संभावना कति छ? ब्लग लिङ्कमा शेयर बटन छ की छैन? बिज्ञापन कति छ? अनावश्यक पप–अपले कति दुःख दिन्छ?
अरुको ट्वीट मेरा फलोअर्स्का लागि उपयोगी होला त? बिषयबस्तुभन्दा आफ्नो बारेमा चर्चा परिचर्चा र बिज्ञापन पो छ की? सामान्य रुपमा भाषिक शुद्धताको कत्तिको ख्याल गरिएकोछ? तपाईको ट्वीट, ब्लगले कुनै बिषयमा आधिकारीक धारणा दिन्छ या तर्कका लागि तर्क गरिरहेको छ?
अरुभन्दा फरक बिचार राख्दैमा पनि स्वतन्त्र मिडिया, इन्टरनेट फ्रिडम, लोकतन्त्र, बिधिको शासन र जनमतको बिपक्षमा पो छ की? कसैलाई आक्षेप लाउदै हुनुहुन्छ की? नकारात्मक कुराहरु बढी छन् समाधानका लागि कुनै सुझाव छैनन् की?
लेखाई कत्तिको स्पष्ट छ? भाषिक शुद्धता नभएपनि भन्न खोजेको कुरा बुझिने गरी अभिव्यक्ति भएको छ?
ट्वीट लामो छ? सहमति वा असहमतिमा मैले केही थप्न पाउँछु?
शेयर गरेको लिङ्क स्पष्ट र सही छ? यदी ब्लग हो भने टाइटल आकर्षक छ की छैन? समाचार हो भने कत्तिको प्रभाव पार्ने खालको छ? लेखाई लामो वा छोटो के छ?
ट्वीटरमा नयाँ हुनुहुन्छ र आफ्नो वास्तविक प्रोफाईल तस्विर (DP) समेत नराखी ट्वीटरकै अण्डा फोटो मार्फत ट्वीट गर्नु भएको छ?
आफ्नो वास्तविक नाम र फोटो राख्नु भएको छ, तपाईलाई चिनाउन सहयोग गर्ने सूचनाहरु छन् की छै्रनन्?
बारम्बार रिट्वीट गर्दा फलोअरसलाई दिक्क त लाग्दैन?
हरेक दिन गर्ने कुरा उहि र उस्तै हुन्छन्? वा ट्वीटमा कुनै नयाँ कुराहरु छ?
ट्वीट रमाईलो, मनोरञ्जक खुराकले भरिएको छ की?
माथि उल्लिखित अधिकांश मेरो जिज्ञासा तथा कौतुहलतामा 'छैन (NO)' भन्ने उत्तर आयो भने म रिट्वीट गर्दिन ।
मेरा लागि ट्वीटर सामाजिक सञ्जाल हो । यो सार्वजनिक थलो हो । यहाँ मलाई कसैले फलो गर्छ भने सायद उसको गरेको अपेक्षा सूचना लेनदेन बाहेक कुराकानी पनि हो । मेरा ट्वीटले बोरिङ बनाउछ भने मलाई फलो गर्नु जरुरी छैन । अनलाइन सामाजिक प्राणी बन्नका लागि म जे पायो त्यही ट्वीट गरेर समय खेर फाल्दिन, जे गर्छु आफ्ना फलोअर्स्लाई दिक्क बनाउन गर्दिन भनेर ट्वीट गर्न थालियो भने तपाईको Klout Score पनि बढ्छ, तपाईका फलोअर्स् पनि बढ्छन्, रिट्वीट र फेवरेट पनि बढ्छ ।
फेवरेट (Favorites) भनेको के हो र किन गर्ने?
सरल अर्थमा बुझौ न, फेवरेट गर्नु भनेको कसैले गरेको ट्वीट मलाई मन पर्यो भन्नु नै हो । राम्रो लाग्यो भन्ने Impression दिनलाई नै प्रायःजसो फेवरेट गरिन्छ । साथै फेवरेट गरेको ट्वीट तपाईको ट्वीटर पेजमा सुरक्षित रुपमा रहन्छ । जसलाई तपाईले कुनै पनि बेला पढ्न, रिट्वीट गर्न वा कुनै उपयोगी लिङ्क छ भने त्यसलाई ट्वीटमार्फत सेयर गर्नका लागि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । ट्वीटरमा हामी कोही पनि २४ सै घण्टा बिताउन सक्दैनौ । ट्वीटरमा भएको बखत आफ्नो टाइमलाइन (RT) मा देखिएका रमाईला, उपयोगी र शिक्षामुलक ट्वीटहरुलाई फेवरेट गरेर राख्न सकिन्छ । यसरी फेवरेट गरेका ट्वीटहरु आफे्नो पेजको देब्रतीर फेवरेटस् (favorites) भन्ने ठाउँमा सुरक्षित रुपमा रहनछन् जसलाई हामीले फुर्सदमा पढ्न र आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्न सक्छौ । (यसबारेमा थप जानकारी पछि दिनेछु)।
Comment by Binaya Shekhar on August 6, 2012 at 9:41pm
Thank you Kranti. I am also learning about Social Media as it's becoming new everyday. Will try my best to post relevant info on SocMed.
Comment by Kranti Darai on August 6, 2012 at 10:49am
म जस्तो भर्खर ट्वीटरमा वामे सर्दै गरेका ट्वीटेलाई निक्कै उपयोगि लाग्यो, धन्यवाद विनय सर । थप जानकारी पनि छिट्टै पाउने आसामा ......